पश्चिम बंगाल राजनीतिमा यतिखेर बिल्कुल नयाँ मोड आएको छ । राजनीतिक संघर्ष सिधासिधा ममता बेनर्जीविरुद्ध नरेन्द्र मोदी, तृणमूल कांग्रेस र भाजपाको बीचमा हुने देखिन्छ । तेस्रो वा चौथो त्यस्तो कुनै पार्टी प्रतिस्पर्धाको मैदानमा बलियो देखिएको छैन ।
अरु पार्टीहरूको त यहाँ चुनावी अस्तित्व नै छैन भने पनि हुन्छ । भाजपा र तृणमूल कांग्रेस भने आमनेसामने खडा भएका छन् ।
तर, यहाँनेर प्रश्न उठ्छ– के भाजपाले यहाँ अरु राज्यहरूमा जस्तै एक जबरजस्त माहौल बनाएको हो वा यस्तो हुनुपर्ने केही वास्तविकताहरू पनि थिए । मलाई लाग्दछ कि केही वास्तविकताहरू पनि छन् । यस्ता वास्तविकताका केही प्रमाणहरू छन् ।
जस्तो कि सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा बंगालमा भाजपाले जबरजस्त सफलता पाएको थियो । भाजपाले ४० प्रतिशत भोट १८ सीट जितेको थियो । जब यी १८ लोकसभा सिटलाई विधानसभा सिटमा ढालेर हेरिन्छ, १२१ विधानसभा सिटमा भाजपाले अग्रता लिएको थियो भन्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका अरु कारण पनि छन् । केही न केही मैदान भाजपाले प्राप्त गरेको छ । मैदानी यथार्थहरू भाजपामा लागि मजबुत हुँदै गएको छ । भाजपाको समर्थन बंगालमा निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई देख्न न कुनै सर्वेक्षण जरुरी छ न बंगालमा घुमेरै हेर्न आवश्यक छ । दिल्ली वा देशको जुनसुकै कुनामा बसेर सजिलै बन्न सकिन्छ कि पश्चिम बंगालमा बितेका ५ वर्षमा भाजपाको समर्थन व्यापक बढेको छ ।
तर, के यसपाली ममता बेनर्जी चुनाव हार्लिन् ? भाजपाले जित्ला ? यो भने निक्कै ठूलो प्रश्न हो । भाजपाको बढ्दो समर्थन तृणमूल कांग्रेसलाई पछि पार्न पर्याप्त भइसेकेको हो ? यसो भन्न भने अझै हतार हुन्छ । यसबारे अनेक अनुमान र विश्लेषण हुन सक्दछन् तर यस्तै निर्णय आउँछ भनेर ठोकुवा गर्ने बेला भने भएको छैन ।
भाजपाले जुन भोट लोकसभाका लागि पाउँछ, ठीक त्यस्तै भोट विधानसभा निर्वाचनमा पनि पाउँछ भन्ने पुष्टि हुँदैन । कयौं त्यस्ता राज्यहरू छन् जहाँ लोकसभाका लागि भाजपालाई भोट दिइन्छ र विधानसभामा अर्कै पार्टीलाई । जस्तो कि दिल्ली, झारखण्ड, राजस्थान, गुजरातको कुरा गर्ने हो भने लोकसभामा भाजपाले ५० प्रतिशतसम्म भोट पाएको छ तर विधानसभामा करिब १२ प्रतिशतसम्मले भाजपाको भोट घटेको पाइन्छ ।
यदि हामीले झारखण्ड, दिल्ली र हरियाणा ३ प्रदेशको मात्र कुरा गर्ने हो भने लोकसभा निर्वाचनको तुलनामा विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाको स्थिति धेरै खराब रह्यो । तसर्थ पहिलो प्रश्न त यही हो कि के पश्चिम बंगालमा सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनको भोट र सफलता भाजपाले दोहोर्याउँन सक्ला कि नसक्ला ? तर बंगालमा के हुन्छ ? अरु प्रदेशको जस्तै विधानसभामा भाजपाको भोट घट्छ वा कायमै रहन्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
चुनावमा यस्तै अनुमान हुने हो । विगतको तथ्यांक हेरिने हो र भविष्यको अनुमान गरिने हो । त्यो मिल्छ नै भन्ने त हुँदैन । तर त बंगालमा भाजपाको भोट सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनको भन्दा घट्ने कारण र आधार भने देखिरहेको छैन ।
दोस्रो कुरा–बंगालमा २९४ विधानसभा सिट छन् । २०१९ को भोट परिणाम दोहोरियो भने पनि भाजपाले १२१ देखि १२५ सम्म जित्ने देखिन्छ । तर यतिले मात्रै त यहाँ भाजपाको सरकार बन्दैन । तर बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा पनि छ । यहाँ कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेरै चुनाव लड्दा पनि दुई अंक पुग्ने सीट ल्याउन गाह्रो छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूको अवस्था बंगालमा साँच्चै नै खराब छ । त्यसो भए सीट कता जान्छ त ?
यस्तो भयो भने फेरि बाँकी सबै सीट तृणमूल कांग्रेसतिरै जान्छ । उसैको बहुमत हुन सक्दछ । भाजपा एक ठूलो पार्टीको विपक्षी दलका रुपमा बंगाल विधानसभामा उदय हुन सक्दछ तर फेरि पनि सरकार भने तृणमूल कांग्रेसकै बन्न सक्दछ । गत चुनावमा तृणमूल कांग्रेसले २१६ सीट ल्याएको थियो । अहिले स्थिति त्यस्तो छैन । तृणमूल कांग्रेसको पनि सीट त घट्छ तर यदि भाजपा १२५ सम्म सीमित भयो भने अरु सबै भोट तृणमूल कांग्रेसमै एकिकृत हुने हुँदा फेरि उसैको सरकार बन्न सक्दछ ।
भाजपा नेताहरू बारम्बार बंगाल गइरहेका छन् । अभियान चलाइरहेका छन् । उनीहरूले ममता बेनर्जी विरुद्ध अनेक सवालमा फसाउन खोजिरहेका छन् । ठीक यहि रणनीति भाजपाले दिल्ली र बिहार विधानसभा निर्वाचनमा पनि अपनाएको थियो । तर, आम आदमी पार्टी र आरजेडी त्यसमा फसेनन । ममताले पनि त्यही गर्नुपर्दछ । उनले भाजपाले तान्न खोजेको विवादमा फसेर न तँतँ मम गर्नु हुँदैन ।
ममताले आफ्नो सरकारले केके गर्‍यो, अब के गर्ने छ त्यति भन्दा काफी हुन्छ । यदि उनी भाजपासंग सवाल जवाफ गर्नतिर लागिन भने त्यसले उनको मुश्किललाई बढाउन सक्दछ । भाजपाको रणनीति नै अनेक विवादास्पद कुराहरू झिकेर चुनावी प्रतिस्पर्धीलाई फसाउने हुन्छ ।
बंगालमा करिब २७ प्रतिशत मुस्लिम मतदाताहरू छन् । तर भाजपाले जति नै जय श्री रामको नारा लगाए पनि हिन्दू ध्रुवीकरण त्यति धेरै भएको छैन जति भाजपाले आशा वा प्रयास गरेको छैन । तर पनि यसको प्रभाव त छ नै ।
विशेषतः ती मान्छेहरू जो तृणमूल कांग्रेसबाट असन्तुष्ट छन् उनीहरूले त त्यही आरोप लगाउँछन् कि ममताले अल्पसंख्यको भावना तुष्टिकरण गर्दछिन् । मुस्लिमलाई राज्य सरकारका क्रियाकलापमा आवश्यकता भन्दा बढी महत्व दिन्छिन् । यदि यो आरोपप्रत्यारोप बढ्यो भने हिन्दू ध्रुवीकरण हुन पनि सक्दछ । तसर्थ ममताले यसबाट बच्न जरुरी छ ।
यहाँ ३५ वर्ष कम्युनिष्टहरूको सरकार थियो । त्यसपछि १० वर्ष तृणमूल कांग्रेसको सरकार रह्यो । यहाँ एकप्रकारको धर्मनिरपेक्षतावादी प्रवृति थियो । तर, पछिल्लो समय त्यसमा दरार देखिन थालेका छन् । तर, अहिले धेरै मान्छे तृणमूल कांग्रेसले मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीति गर्दैछ भन्ने पर्न थालेको छ ।
बंगाल राजनीतिमा १०/२० वर्ष अघिजस्तो छैन अहिले । त्यो धार नै बिल्कुल बद्लिएको छ । यदि मुस्लिम तुष्टिकरणलाई छोडेर हेर्ने हो भने आउने चुनावमा मानिसले भाजपालाई भोट दिनु पर्ने कुनै कारण देखिन्न ।
अर्को कुरा के छ भने बंगाल राजनीतिमा जुन बदलाव आएको छ, त्यो सवाल केन्द्रित भन्दा पनि परिवर्तनको चाहनाबाट निर्देशित छ । यहाँ कांग्रेस, कम्युनिष्ट र तृणमूल कांग्रेसलाई पुराना पार्टीको रुपमा हेरिन्छ । मानिसहरू परिवर्तन चाहन्छन् र भाजपालाई त्यसको फाइदा भइरहेको छ । भाजपा मान्छेलाई आफ्नो पार्टी जस्तो लाग्न थालेको छैन ।
कांग्रेस र कम्युनिष्टले गठबन्धन बनाएका छन् । तर उनीहरूले तेस्रो ध्रुवको भूमिका गर्न सक्ने सम्भावना नै छैन । चुनाव दुई ध्रुव्रीय नै हुन्छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू यहाँ हिनताको अवस्थामा छन् । उनीहरूको स्वर कमजोर छ ।
यहाँसम्म कि गठबन्धन बनाएको कुरा समेत उनीहरू हाक्काहाक्की गर्न सकेनन् । लुकाएजस्तो गरी गरे । यो गठबन्धनले १० प्रतिशतसम्म भोट प्रभावित गर्न सक्दछ । तर, त्यसले सिटमा खासै प्रभाव पार्दैन ।
सत्यहिन्दी डटकममा आशुँतोषसंगको कुराकानीबाट ।